Gandaki Sanchar » अनशनको २१औं दिन, न सम्झौता कार्यान्वयन न वार्ता
असोज १८, काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै गम्भीरु बनेको छ। विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर २० दिनदेखि अनशनरत डा. केसीसँग वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन १० गते गरेको सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डा. केसीले भदौ १९ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा १९औं अनशन थालेका हुन्। उनी यति बेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शड्ढयामा जीवन–मरणको दोसाँधमा छन्।
त्रिविले वरिष्ठता सूचीको ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरेपछि डा. केसीले दोस्रो अनशन सुरु गरेका थिए। सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न कार्यकारी परिषद्लाई बाध्य पारेपछि अनशनको छैटौं दिनमा डा. प्रकाश सायमिलाई डिन बनाएपछि अनशन तोडिएको थियो। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका आइओएमका डिसी शर्मालाई बर्खास्त गर्नेसहितका माग राखेर डा. केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरेका थियो। डिन शर्मालाई बर्खास्त गर्नेलगायतका सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेका थिए। अहिले फेरि त्यही एजेन्डा अघि सारेर अनशन बस्ने स्थिति आउनु दुःखद भएको उनका समर्थकहरूको भनाइ छ।साभार–नागरिक दैनिकवाट
प्रकाशित मिति १८ आश्विन २०७७, आईतवार ०२:१९